Clarens, Free State, eMzantsi Afrika
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNicolene
Esi situdiyo sikhululekileyo kodwa sinesitayile esivulekileyo sikwidolophu yaseLarola eneeyure ezingama-24 zokhuseleko. Isitudiyo sikwipropathi enye nendlu enkulu kwaye yabelana nge-driveway kunye nendlu enkulu. Isitudiyo sineembono ezintle zeentaba ukusuka kwidoube glass sliding doors. Isitudiyo sikwi-600m ukusuka kwezona ndawo zokutyela zikufutshane neevenkile kwaye malunga ne-1.5km ukusuka kwisikwere selali esembindini. I studio inayo i-wifi. Kukho amajelo e-dstv ambalwa (iphakheji yosapho).
I-studio isicwangciso esivulekileyo , oku kuthetha ukuba indawo yokuhlala, indawo yokulala kunye nekhitshi idityaniswe kwindawo enye. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, iipleyiti ezi-2 zesitovu esiphathwayo & ne-oven combo kunye nezinto eziyimfuneko zokusika kunye nezitya. kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo, elineshawa (akukho bhafu). Ibafanele abantu abadala aba-2 kodwa abantwana aba-2 banokuhlaliswa kwi-sleeper couch.
Ibhedi enkulukazi inengubo yombane yokukugcina ushushu kubusuku obubandayo baseClarens.
Umnyango udlula kwiingcango zeglasi ezityibilikayo ezinokubonwa kwiifoto. Iingcango zeglasi ezityibilikayo zikhokelela kwindlela ekwabelwana ngayo. Le yunithi ayinayo igadi yayo yabucala engasese. Nangona kunjalo, kukho ifenitshala yegadi kunye ne-weber kwindawo enengca ngaphandle nje kwe studio apho iindwendwe zamkelwe ukuba ziyisebenzise.
Kukho amajelo e-dstv ambalwa (iphakheji yosapho)
Lo mhlaba uvalelwe kwaye ufikeleleka ngesango lombane. indawo yokupaka ikwipropati. Indawo yokupaka ayikho phantsi kwekhava.
Kukho umqhagi kulo mhlaba othanda ukuvakala kwakusasa.
Kukho i-weber ekhoyo kunye netafile kunye nesitulo sangaphandle, ukuba unqwenela ukwenza ibraai/barbeque.
Xa ujonge ukubethelwa kwengoma kule ndawo ineentaba, usenokuva umculo ophuma kwiindawo ezahlukeneyo zaseClarens.
IClarens yilali entle ebekwe emazantsi eMajestic Malutis. Ilali yonwatyiswa ngumzobi . Iindawo zokutyela zigcwele njengeevenkile ezincinci ezinqabileyo. Iijunki zeAdrenaline zinokufumana ukulungiswa kwazo ngomlambo omhlophe we-rafting, i-ziplining, ukubiza nje ezimbalwa. Kukho iindlela ezininzi zokukhwela intaba. Lo mmandla uqhayisa ngezona ndawo zihamba phambili zokuloba iitrout. Ukongeza iClarens inebala legalufa eligcinwe kakuhle kwaye nangona ndinokuthambekela kwelinye lawona mahle kakhulu. IGolden Gate National Park ikumgama oziikhilomitha ezili-15 kuphela
Ndinenye indawo yestudio eyile de Klerens Gems: Topaz self catering ekhoyo, ekwiLarola Terraces Complex. Esi studio sinokujongwa apha: https://www.airbnb.com/rooms/35571237?photo=0&s=13&user_id=88349535&ref_device_id=f66a128a46fb7daf
ngezantsi kwekhonkco kwikhalenda yeziganeko ze-clarens
ngezantsi kwekhonkco ukuya kwiSikhokelo esiGqibeleleyo kwiiClarens kunye neZingqongileyo.
4.80 ·Izimvo eziyi-210
4.80 out of 5 stars from 210 reviews
4.80 · Izimvo eziyi-210
IClarens yiparadesi encinci ebekwe emazantsi eentaba ezinkulu zeMaluti. Isuphu yenkukhu yomphefumlo. Isitudiyo sikwihlomela-dolophu laseLarola elinonogada bezokhuseleko iiyure ezingama-24. I-cottage imalunga ne-600m ukusuka kwiivenkile zokutyela kunye neevenkile ezikufutshane kunye ne-600m eyongezelelweyo ukusuka kwisikwere selali esembindini.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicolene
I am a married 45 year old mom to 2 gentlemen aged 14 and 7. I live in the beautiful eastern free state village of Clarens and am a part time lecturer in South African Sign Language at the University of the Free State.
Ndihlala kwipropathi kwaye ndingafowunelwa 24/7 ngesms, whatsapp okanye i-imeyile (okanye ukunkqonkqoza nje kucango lwam lwangaphambili)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Clarens